Hormarka Dalka Archives - Ceelhuur Online
Home > Archive by Category Hormarka Dalka
Category: Hormarka Dalka
Eng. Yariisow oo Dhagaxdhigay dhismaha Waddo Laami ah (Sawirro)
June 9, 2019 June 9, 2019 admin1353
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng:Yariisoow) Ayaa daah-furay mashruuc lagu dhisaayo wada laami ah oo isku xirta isgoyska Siinaay iyo isgoyska Baar-Ayaan ee degmooyinka Warta Nabada iyo Yaaqshiid. Furitaanka mashruucan waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka arimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Caamir iyo guddoomiyaasha degmooyinka Warta Nabada, Yaaqshiid iyo […]
July 19, 2018 admin1433
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Tiknolojiyada Eng. Cabdi Cashuur Xasan ayaa daah furay Adeegga taakuleynta Internet-ka iyo isku xirka Jaamacaddaha dalka iyo kuwa caalamka, munaasabad maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Barnaamijkan oo loogu talogalay in kor loogu qaado tayada waxbarashada sare ee dalka ayaa waxa uu bixin doonaa internet bilaash ah oo ay ka faa’iideysan doonaan […]
March 6, 2018 admin930
Ahmed Cumar Sahal waa Nin dhalinyaro ah oo ku nool Magaalada Cadaado, waxa uu ku guuleystay inuu sameeyo Nal ku shaqeeynaya ileyska Cadceedda, Waxaana hirgalinta fikradan ka taageeray Maamulka iyo Ardayda Dugsiga Sare ee Ganacsiga Ileys Magaalada Cadaado. Nalkii uu sameeyey ayaa laga taagay xaafadda Haraaley magaalada Cadaado, halkaas oo aad ugu baahneyd. hadaba sheekada […]
Cadaado: Habka Carsiga ah ee Dhaqashada Geela (Video)
November 2, 2017 admin12711 Comment on Cadaado: Habka Carsiga ah ee Dhaqashada Geela (Video)
Kusoo dhawaada daawashada Muuqaal aan idinka diyaarinay habka casriga ah ee dhaqashada Geela duleedka Magaalada Cadaado. Fadlan share garee Muuqaalka.
Dhismaha Caasimadda Cusub ee Soomaaliya… Qaybtii 2-aad
October 15, 2017 admin909
Qaybtii 2-aad Dhismaha Caasimadda Cusub ee Soomaaliya (Sinaariyo: Xog loo qaateen ah) (Xaaladaha aan Caadiga ahayn waxaa looga bixikaraa, Xeelado aan Caadi ahayn) Q: Shariif Cosmaan Odeygii kale oo ganacsatada ka tirsanaa ayaa gacanta taagey. Laakiin intii uusan su’aashiisii u galin ayaa waxaa ka dhexgalay aqoonyahankii horey wax u sharxayey. Wuxuuna weydiiyey bal sida uu […]
September 13, 2017 September 13, 2017 admin744
Waxaa hotelka Royal Palace Magaalada Muqdisho maanta ka furmay Carwada 3-aad buugaagta Muqdisho, carwadan ayaa socon doonta saddexda maalin 13, 14 iyo 15 Sebtember 2017. waxaana ka soo qeybgalay qalinley isugu jirta Soomaali iyo anjabi, suugaanyahano, hiddodhowrayaal, Murtimaalo, aqoonyahano iyo marti farabadan. Waa sanadkii saddexaad ee la qabto carwadaan, waxay bog cusub u furtay Bulshada […]
Sawirro: Horumarka iyo Bilicda Muqdisho #MogadishuRising (1)
September 9, 2017 September 9, 2017 admin859
Akhritayaasheena sharafta leh halkaan waxaan idinku soo bandhigeynaa qeyb ka mid ah sawiro aan ka qaadnay Horumarka iyo Bilicda Magaalada Muqdisho, waxaana hadda kadib idiin soo bandhigi doonaa Quruxda iyo horumarka dalkeena Soomaaliya, inagoo booqan doona magaalooyin badan. La wadaag saaxiibadaa. Share gareentaadu waa dhiirigalinteena. Please #Share Wixii talo iyo tusaale ah noogu soo dir […]
Daawo Muuqaal Qurux Badan … #Hobyo #Beach….
July 17, 2017 admin1011
Halkaan waxaad ka daawan kartaan Muuqaal Qurux badan oo aan idinkaga diyaarinay Xeebta Magaalada Qadiimiga ah ee Hobyo Godan. Fadlan la wadaag saaxiibadaa. #Hobyo #Beach #CeelhuurOnline #Share
Sawirro: Ra’iisulwasaare Kheyre oo xariga ka jaray Wadada Dr. Kadare
March 27, 2017 admin699
Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta Xariga ka jaray waddo laami ah oo maamulka gobolka Banaadir uu dib u dayactir ku sameeyey, taasoo loogu magac daray Dr. Xuseen Sheekh Axmad (Kadare) oo ka mid ahaa aqoonyahanada udub dhexaadka u ahaa dhaqanka iyo afka Soomaaliga. Waddadan laamiga ah ayaa dhexmarta degmooyinka Kaaraan iyo […]
March 14, 2017 admin923
Dhismahada wadada Mariino oo hadda loo bixiyey wadada Dr. Kadare ayaa meel fiican maraysan, waxaana bilowday in laami la saaro. Shirkadda Kulmiye Service ayaa fulinaysa dhismaha wadadan waxaana maalgalinaya maamulka gobolka Benaadir. Wadadaan ayaa 4 Feberaayo waxaa dhagaxdhigay gudoomiya gobolka Benaadir ahna Duqa Muqdisho Yuusuf Jimcaale, waxaana wadadaan isku xirtaa degmooyinka Cabdi Casiis iyo Kaaraan. […]